Genesis 18 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Mozambican Sign Language Myanmar Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Abɔfo baasa kɔsraa Abraham (1-8)
Wɔhyɛɛ Sara bɔ sɛ ɔbɛwo ɔbabarima; ɔserewee (9-15)
Abraham srɛ maa Sodom (16-33)
18 Akyiri yi, bere a ɔte ne ntamadan ano awia ketee a wim ayɛ hyew no, Yehowa+ yii ne ho adi kyerɛɛ no wɔ Mamre nnua akɛse+ no mu. 2 Ɔmaa n’ani so no, n’ani bɔɔ mmarima baasa so sɛ wogyinagyina akyirikyiri.+ Bere a ohuu wɔn no, otuu mmirika fii ntamadan no ano kohyiaa wɔn, na ɔbɔɔ ne mu ase. 3 Ɛnna ɔkae sɛ: “Yehowa, sɛ manya w’anim dom a, mesrɛ wo, ntwa w’akoa ho nkɔ. 4 Mesrɛ mo, momma wɔmfa nsu kakra mmɛhohoro mo nan ho,+ na monhome wɔ dua yi ase. 5 Moanya aba mo akoa nkyɛn yi de, momma mempɛ paanoo sin bi mma mo nni na munnwudwo mo ho.* Muwie a afei mubetumi akɔ mo kwan.” Ɛnna wɔkae sɛ: “Yɛate. Yɛ sɛnea woaka no.” 6 Enti Abraham yɛɛ ntɛm kɔɔ Sara nkyɛn wɔ ntamadan no mu, na ɔkae sɛ: “Yɛ ntɛm! Fa esiam muhumuhu susukuruwa* abiɛsa na fɔtɔw fa yɛ paanoo.” 7 Ɛno akyi no, Abraham tuu mmirika kɔɔ ne mmoa mu kɔkyeree nantwi ba kama a ne nam yɛ mmerɛw de no maa n’akoa, na ɔno nso siesiee no ntɛm. 8 Afei ɔde bɔta ne nufusu ne nantwi ba a ɔde ayɛ aduan no besii wɔn anim. Na wɔredidi nyinaa na ogyina wɔn nkyɛn wɔ dua no ase.+ 9 Afei wobisaa no sɛ: “Wo yere Sara+ wɔ he?” Na obuae sɛ: “Ɔwɔ ntamadan no mu.” 10 Enti wɔn mu baako kae sɛ: “Afe sesɛɛ mɛsan aba wo nkyɛn saa bere yi, na ebedu hɔ no na wo yere Sara awo ɔbabarima.”+ Bere a ɔrekasa nyinaa na Sara wɔ ntamadan no kwan ano wɔ ɔbarima no akyi retie. 11 Ná Abraham ne Sara nyinaa anyinyin,+ na na wɔn mfe akɔ anim. Ná Sara anyin dodo sɛ obetumi awo.*+ 12 Enti Sara fii ase serewee ne mu sɛ: “Saa bere yi a mabɔ aberewa na me wura nso abɔ akwakoraa yi, metumi anya saa anigye yi?”+ 13 Ɛnna Yehowa bisaa Abraham sɛ: “Dɛn nti na Sara serew kae sɛ, ‘Mabɔ aberewa yi, ɛbɛyɛ dɛn koraa na matumi awo ba?’ 14 Biribi wɔ hɔ a ɛboro Yehowa so anaa?+ Afe sesɛɛ mɛsan aba wo nkyɛn saa bere yi, na ebedu hɔ no na Sara awo ɔbabarima.” 15 Nanso na Sara suro, enti ɔkae sɛ: “Manserew!” Ɛnna ɔkae sɛ: “Daabi, woserewee.” 16 Mmarima no sɔree sɛ wɔrekɔ, na Abraham gyaa wɔn kwan koduu baabi, na wɔtoo wɔn ani no, wohuu Sodom.+ 17 Yehowa kae sɛ: “Nea merebɛyɛ yi, adɛn nti na ɛsɛ sɛ mede sie Abraham?+ 18 Hwɛ, ɔkwan biara so Abraham bɛyɛ ɔman kɛse a ɛyɛ den, na aman nyinaa nam no so benya nhyira.*+ 19 Me ne no anantew sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛma ne mma ne ne fifo a wɔbɛba akyiri yi afa Yehowa akwan so,+ na wɔayɛ nea ɛteɛ abu atɛntrenee. Ɛno bɛma Yehowa adi ɛbɔ a wahyɛ Abraham no so.” 20 Afei Yehowa kae sɛ: “Osũ ne nteɛm a Sodom ne Gomora ama aba no ano yɛ den,+ na wɔn bɔne nso mu yɛ duru papaapa.+ 21 Mɛkɔ akɔhwɛ sɛ osũ ne nteɛm a mate no, saa na wɔreyɛ anaa, na sɛ ɛnte saa nso a mehu.”+ 22 Ɛnna mmarima no fii hɔ de wɔn ani kyerɛɛ Sodom; nanso Yehowa+ de, na ɔda so wɔ Abraham nkyɛn. 23 Afei Abraham twiw bɛn Onyankopɔn, na obisaa no sɛ: “Enti ampa ara sɛ wobɛpra atreneefo aka abɔnefo ho?+ 24 Fa no sɛ atreneefo 50 na wɔwɔ kurow no mu. Wubebu w’ani agu atreneefo 50 no so na woasɛe kurow no nyinaa a worenhu wɔn mmɔbɔ? 25 Worentumi nni asɛm a ɛte saa da! Worenkum ɔtreneeni nka ɔbɔnefo ho mma enwie ɔtreneeni sɛ ɔbɔnefo.+ Worentumi nyɛ saa da.+ Asaase nyinaa temmufo no renyɛ nea ɛteɛ anaa?”+ 26 Ɛnna Yehowa kae sɛ: “Sɛ mihu atreneefo 50 wɔ Sodom kurow no mu a, wɔn nti mehu kurow no nyinaa mmɔbɔ.” 27 Nanso Abraham kae sɛ: “Mesrɛ wo, meyɛ dɔte ne nsõ, nanso meremia m’ani ne Yehowa akasa. 28 Fa no sɛ aka nnipa baanum ansa na adu atreneefo 50. Nnipa baanum a afi so no nti wobɛsɛe kurow no nyinaa?” Ɛnna ɔkae sɛ: “Sɛ minya nnipa 45 wɔ hɔ a merensɛe no.”+ 29 Ɔsan ka kyerɛɛ no sɛ: “Fa no sɛ 40 na wɔwɔ hɔ.” Ɛnna ɔkae sɛ: “Nnipa 40 no nti merensɛe no.” 30 Ɔtoaa so sɛ: “Yehowa, mesrɛ wo meresan akasa bio, na mma wo bo mmfuw me:+ Fa no sɛ atreneefo 30 na wɔwɔ hɔ.” Ɛnna ɔkae sɛ: “Sɛ minya 30 wɔ hɔ a, merensɛe no.” 31 Nanso ɔtoaa so sɛ: “Mesrɛ wo oo, meremia m’ani ne Yehowa akasa bio: Fa no sɛ 20 na wɔwɔ hɔ.” Ɛnna ɔkae sɛ: “Nnipa 20 no nti merensɛe no.” 32 Afei ɔkae sɛ: “Yehowa, mesrɛ wo mma wo bo mmfuw me, na ma menka nea etwa to yi: Fa no sɛ atreneefo du na wɔwɔ hɔ.” Ɛnna ɔkae sɛ: “Edu no nti merensɛe no.” 33 Bere a Yehowa ne Abraham kasa wiei no, ɔkɔe+ na Abraham nso san baa ne fi.
^ Nt., “momfa nhyɛ mo koma den.”
^ Nt., “seah susude.” Seah susude baako yɛ lita 7.33 (bɛyɛ olonka 2 ne magyirin konko 2 ne fã). Hwɛ Nkh. B14.
^ Kyerɛ sɛ, ná Sara atwa bra.
^ Anaa “benya nhyira ama wɔn ho.”